Ukumaketha Kweselula Kubuyile Ku-Vogue - Amabhrendi Angayenza Kanjani Futhi Akhuphule Imikhankaso Yawo Yeselula? | Martech Zone
Wonke umuntu wamukela ubiquity kwamadivayisi eselula. Ezimakethe eziningi namuhla - ikakhulukazi emazweni asathuthuka - akuyona nje indaba iselula kuqala kodwa iselula kuphela.
Kwabakhangisi, ubhubhane lusheshise ukuthuthela kwedijithali ngesikhathi esifanayo njengoba ikhono lokukhomba abasebenzisi ngamakhukhi ezinkampani zangaphandle liqedwa.
Lokhu kusho ukuthi iziteshi zeselula eziqondile manje sezibaluleke nakakhulu, nakuba izinhlobo eziningi zisabophele imikhankaso yokumaketha ehlanganisiwe nehlukene evala igebe phakathi kwe-inthanethi evamile kanye iselula kuqala izindlela.
Kunamaphuzu amaningi ezinhlungu, ikakhulukazi ukuntuleka kwe-ID yomsebenzisi engashintshi kuzo zonke izinkundla namashaneli ahlukene. Umsebenzisi wokugcina ngokuvamile ugcina efakwe ugaxekile ngokweqile, futhi umlayezo womkhiqizo ugcina usungahambisani - noma ulahlekile ngokuphelele.
I-Upstream ithuthukise yayo Khulisa inkundla yokumaketha yeselula emzamweni wokubhekana nalezi zinkinga. Yembule inkundla njengoba ubhubhane lwe-COVID-19 luphendulela umhlaba phansi futhi lwenza ukusebenzelana kwedijithali kwaba yisidingo kunokuba kube okunethezeka emabhizinisini amaningi.
Pho Kuyini Ukukhula?
Ake siqale ngezisekelo. I-Grow iyinkundla yokumaketha yedijithali eyenza izinhlangano zikwazi ukuletha ukusebenzelana kwamakhasimende eziteshi eziningi, ikakhulukazi ngamadivayisi eselula, kusetshenziswa iziteshi ezifana namawebhusayithi eselula, i-SMS, i-RCS, izaziso zedivayisi nezinkundla zokuxhumana. Inikezwa njengenkundla yokuzisiza yokuthengisa ezishintshayo. Kodwa-ke, i-Upstream nayo inomnikelo wesevisi ophethwe, osebenza kahle ezimeni lapho amakhasimende engenawo umkhawulokudonsa owengeziwe noma ubuchwepheshe bokuqhuba imikhankaso yokuthengisa yedijithali eyinkimbinkimbi.
Inkundla ihlose ukuba a isitolo esisodwa okwemikhiqizo. Ihlanganisa ukudalwa kokuqukethwe, ukuzenzela komkhankaso, izibalo, imininingwane yababukeli, ukuvimbela ukukhwabanisa kwezikhangiso kanye namakhono okuphatha isiteshi kube yinkundla eyodwa.
Isinyathelo sokuqala ukudala nge- Isitudiyo somkhankaso lapho amaklayenti angakha khona uhambo oluguquguqukayo, lweziteshi eziningi, ngaphandle kokuzizwisa ngamakhodi. Kuyinto enembile kakhulu, kusetshenziswa ukuhudula nokuwisa ukuze wakhe, uhlele futhi uhlole kuqala konke okwenziwa umsebenzisi.
Okulandelayo kuza isikali. I Marketing Automation ithuluzi livumela izinhlangano ukuthi zenze ngokuzenzakalelayo ukugeleza kokumaketha kwekhasimende ngalinye ukuze kuzuzwe izindlela zokuthenga ezenziwe ngokwezifiso, ukuze ukumaketha esikalini kusengazizwa kufanele, kwazi umongo kanye nokomuntu siqu.
The Ukuphatha Izilaleli ivumela amabhizinisi ukuthi athole, aphathe, achaze, ahlaziye futhi enze idatha yekhasimende isebenze ukuze kwenziwe umkhankaso onembe kakhudlwana owedlula amasethi edatha ayisisekelo ukuze ibhajethi yabiwe kangcono.
Futhi-ke kukhona Imininingwane kanye nezibalo izici, ezakha umgogodla we-Grow platform. Ngokusebenzisa amanani amakhulu edatha, amabhizinisi angacija imikhankaso ukuze ayenze isebenze kahle ngokuhamba kwesikhathi ngokuqoqa imininingwane ngokusebenza, ukusebenzelana, ukuhwebelana, imali engenayo nokunye.
Ukuvikelwa ekukhwabaniseni kuza nge-Secure-D, isici esilwa nokukhwabanisa sakwa-Upstream, esivikela ekukhwabaniseni izikhangiso kusetshenziswa ukuvinjwa kwezikhangiso okuqagelayo okwakhelwe ngaphakathi, ukuvinjwa kwephethini yokuziphatha, inqubo yokususa inkokhiso, izaziso zedivayisi enegciwane, ukulinganisa, uphenyo lwesigameko nesixhumi esibonakalayo esivikelekile.
Kuhlangana kanjalo konke. Manje ake sibheke ukuthi inkundla isetshenziswa kanjani amabhrendi acabanga phambili.
Ngokushabalala kwamakhukhi ezinkampani zangaphandle kuseduze kakhulu, uhlobo lukabhiya oludumile lwaludingeka ukuze luqale ukwakha ubudlelwano obuqondile namakhasimende kwenye yezimakethe zalo ezibalulekile - eBrazil. Lapho ubhekene noshintsho olunjalo uhlobo lwalufuna ukuqala ukwakha i-arsenal ye iqembu lokuqala idatha, ngakho-ke ingathuthukisa indlela eqondile yokubandakanya izethameli futhi ikhuthaze okunikezwayo okusha - futhi yabele kangcono isabelomali sayo sokumaketha.
Ngokusebenzisa i Khulisa iplatifomu, umkhiqizo ukwazile ukufinyelela isisekelo sababhalisile se-opharetha yeselula yaseBrazil enkulu - enikeza u-50MB wedatha yeselula yamahhala ukuze uthole imininingwane yabo. Ngesonto elilodwa, isikhiqize imikhondo engaphezu kuka-100,000. Lokhu kuyinikeze inqwaba yamathemba engazibandakanya nayo futhi ithumele amaphromoshini futhi yavuselela amandla ayo okumaketha esifundeni.
Elinye ikhasimende, umqhubi wezingcingo ohamba phambili eNingizimu Afrika, kwakudingeka athuthukise izinga lokuthathwa kwesevisi yalo yokusakazwa komculo ezimakethe zendawo. Kodwa-ke, umsebenzi ubebhekene nokutholwa kwamakhasimende kanye nezinkinga zokwenza imali njengoba imikhankaso yangaphambilini yokumaketha ibingasebenzi kahle. Ngokuhamba kwesikhathi, ibidinga isevisi entsha ukuze iqhudelane mathupha neSpotify kanye ne-Apple Music futhi ibe insizakalo yokusakaza umculo ethandwa kakhulu eNingizimu Afrika.
Ezinyangeni ezintathu zokuqala zomkhankaso, opharetha wabona ukwanda okumangazayo okungu-4x kusisekelo sabasebenzisi abasebenzayo besevisi yokusakaza umculo. Phakathi nomkhankaso wezinyanga eziyi-8, ababhalisile abasha abacishe babe izigidi ezimbili (2 million) balethwe kule nkonzo. Ezinyangeni eziyi-1.8 kuphela, umkhiqizo wawuguqule izinga eliphezulu - kodwa elingasebenzi kahle - isevisi yedijithali yaba umthombo oqinile wemali engenayo ephindaphindiwe kanye nomholi wemakethe esikhaleni.
Kafushane, umgomo we-Grow uwukwenza ukumaketha kweselula kube kuhle futhi, ukuhlinzeka abasebenzisi ngohambo lwamakhasimende olukhulu ngangokunokwenzeka, olwenzelwe ubuntu nezidingo zabo, okuletha ukusebenza kahle kokumaketha kumazinga amasha ngokuphelele ebhizinisi. Inkundla ifakazelwe ukuthi ihlinzeka ngokuphindwe kathathu amanani ezingxoxo kanye naphindwe ka-3 amanani okuzibandakanya uma kuqhathaniswa nomkhankaso wedijithali ojwayelekile, ongenasidingo ngokuphelele sokutshalwa kwezimali kwangaphambili.
Lokhu ukumaketha kweselula okwenziwe kahle.
I-Upstream yinkampani yezobuchwepheshe ehamba phambili emkhakheni wokumaketha omakhalekhukhwini ezimakethe ezisafufusa ezibaluleke kakhulu emhlabeni. Iplathifomu yayo yokumaketha yeselula, Khulisa, eyingqayizivele ngohlobo lwayo, ihlanganisa izinto ezintsha emkhakheni wezokuzenzakalela zokumaketha kanye nedatha, ukuphepha ekukhwabaniseni kokukhangisa ku-inthanethi, nokuxhumana kwedijithali kweziteshi eziningi okuhloswe ngayo ukudala okuhlangenwe nakho komuntu siqu kubathengi bokugcina. Ngemikhankaso yokuthengisa yeselula engaphezu kuka-4,000 ephumelelayo, ithimba eliPhezulu lisiza amakhasimende alo, amabhrendi aholayo emhlabeni jikelele, ukuxhumana ngokuphumelelayo namakhasimende abo, ukwandisa ukuthengiswa kwedijithali futhi akhulise imali yawo engenayo. Izixazululo ezikhuphukayo zihloselwe kubathengi abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.2 emazweni angaphezu kwe-45 eLatin America, e-Afrika, eMpumalanga Ephakathi naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia.
Tags: umculo we-apulaukuvinjwa kwephethini yokuziphathaiqembu lokuqalasikhuleiziteshi eziningiukuphathwa kwezithameli zeselulaidatha yokuziphatha kweselulaukuhlela umkhankaso weselulai-orchestration yesiteshi sikamakhalekhukhwiniukuhamba kweselulaubuciko beselulaidatha yezibalo zabantuidivayisi yeselulaukuzibandakanya kweselulaiselula kuqalaumakhi wohambo lweselulakpi mobilekpis mobileukumaketha amaselulaezenzakalelayo ukumaketha ezishintshayomobile marketing automation platformimikhankaso yokuthengisa yeselulaidatha yokusebenza kweselulaingosi yeselulaizaziso zohlelo lokusebenza lweselulaukubuyisela kabusha iselulaimali yeselulaimivuzo mobileukuphepha kweselulaukuhlukaniswa kweselulaezokuxhum mobileukukhomba kweselulaidatha yokwenziwayo yeselulaUmculoi-predictive ai blockingphakamisaumfulaukukhula komfula
U-Dimitris Maniatis ujoyine Phezulu ngo-2017 ukuya e-Secure-D. Ngaphansi kobuholi bakhe i-Secure-D ikhule yaba inkundla yokuphepha ewina umklomelo, yezinga lenkampani yenethiwekhi, ethenjwa opharetha benethiwekhi yeselula emhlabeni jikelele. Ube yi-Upstream CEO ngoJanuwari 2020 futhi wahola ngempumelelo uguquko lwenkampani lwaba inkundla yokumaketha yamaselula. Ngaphambi kokujoyina i-Upstream, u-Dimitris ubekhangisa nge-'all things web', i-ejensi yokumaketha yedijithali ayisungula ngo-2009.